Voadika ny 09 Novambra 2012 2:56 GMT
Ao Bangladesh, nanjary malaza ny fampiasana teny Anglisy amin'ny literatiora. Tsy hihanoka fotsiny amin'ny fanoratana amin'ny teny Bangla, mpanoratra maro no nanapa-kevitra hanoratra amin'ny teny Anglisy. Zava-baovao malaza ao Bangladesh izany. Hihaona indray ireo mpanoratra amin'ny teny Anglisy ao Dhaka amin'ilay hetsika andiany faharoa Hay Festival. Amin'ny 15-17 Novambra 2012 no hotontosaina ny fetibe izay atao ao amin'ny tokotany manatantara ao amin'ny Akademia Bangla, Dhaka. Antenaina fa mandritra ity hetsika ity, hiroborobo eo amin'ny fiarahamonin'ny literatiora manerantany ireo mpanoratra vaovao amin'ny teny Anglisy ao Bangladesh.